Boeny : hasiana “puce” elektronika ny omby | NewsMada
Boeny : hasiana “puce” elektronika ny omby
Efa tetikasan’ny filoha teo aloha, Ravalomanana, ny hametrahana ny “puce” elektronika any anatin’ny omby, hanamora ny fanaraha-maso sy hiarovana amin’ny halatra. Mikasa hanao izany indray ny fitondrana ankehitriny, nampahafantarina tany Mahajanga, faritra Boeny.
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, ny alarobia 3 mey teo, tany Betaba, fokontany Tsinjorano, kaominina Manerinerina, distrika Ambato Boeny, ny taom-baksiny ho an’ny biby fiompy taona 2017 tany amin’ny faritra Boeny. Lohahevitra noraisina ny hoe “asa fambolena sy fiompiana mahomby, Madagasikara mandroso”, nentina nanentanana ny mponina hiahy ny fahasalaman’ny biby fiompy. Nambaran’ny prefet-n’i Mahajanga, Ravelomahay Lalaniaina, fa “toy ny zavamananaina rehetra, manana zo hotsaboina sy ho salama ny biby fiompy”.
Nampahafantarina, nandritra ity fotoana ity koa ny lalàna vaovao 2017-023, mikasika ny biby manokana. Voarakitra ao fa ampitomboina ho efatra ny isan’ny kahien’omby raha telo teo aloha. Voaresaka ao koa ny hametahana puce elektronika ny omby, hanamorana ny fanarahan-dia raha sendra misy ny halatra.
Mijanona ho soratra
Efa novinavinain’ny filoha teo aloha, Ravalomanana, ity tetikasa hametrahana ny puce elektronika any anatin’ny omby ity, saingy tsy tanterany. Nanombohany azy ny fanangonana ny omby anatin’ny antsoina hoe “valabe”, hisorohana ny halatr’omby. Mamerina azy ny fitondrana ankehitriny, saingy tsy fantatra raha ho tanterany koa na mijanona ho soratra ihany. Tsy nisy aloha, hatreto, filazana azy tamin’ny fomba ofisialy manerana ny Nosy, tsy nisy koa ny fampahafantarana ny antsipiriany, toy ny tetibola holanina, ny fotoana tena hampiharana azy, fa io mijanona ho lalàna io fotsiny. Fahita matetika eto amin’ny firenena ny toy izany.
Nitombo ny omby natao vaksiny
Tratra ny tanjona tamin’ny andro voalohany, satria tafakatra 1.626 ny omby vita vaksiny raha 1.400 ny nokasaina. Nahena ho 500 Ar ny vidin’ny vaksiny raha 700 Ar amin’ny andavanandro. Naloan’ny solombavambahoaka voafidy tany Ambato Boeny ny saran’ny vaksiny ho an’ny omby 1.000 tonga voalohany. Nampahafantarina tamin’ity fotoana ity koa ny tompon’andraikitry ny fari-piadidiana ny fiompiana efatra any amin’ny distrikan’i Marovoary, Mitsinjo-Soalala, Mahajanga I sy II, sy an’ny fambolena miisa telo.